बिहान उठ्ने बित्तिकै गर्नुहोस् यि काम, सधै हुन्छ फलिफाप ! - NepalKhoj
बिहान उठ्ने बित्तिकै गर्नुहोस् यि काम, सधै हुन्छ फलिफाप !
नेपालखोज २०७९ वैशाख ३१ गते ५:००
बिहान दिनको प्रतिक हो । नयाँ दिनको सुरुवात हो । त्यसैले बिहानको समयलाई मानlसहरु प्रेम गर्छन् । दिन शुभ रहोस् भन्ने कामना गर्छन् । पूजापाठमा सक्रिय रहन्छन् । मनलाई शान्त पार्ने, देवतालाई खुशि पार्नमा प्रयत्नशील रहन्छन् ।
बिहान अरु के-के गर्यो भने हुन्छ फलिफाप ? बिहान उठ्ने बित्तिकै गर्नुहोस् यि सात ७ काम, सधै हुन्छ फलीफाप
दिनहुँ सम्भव नभए पनि शरीरमा तेल लगाउनु स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिन्छ । हुन त गाउँघरमा राति सुत्ने बेलामा तेल लगाउने चलन छ । तर, तेल लगाउँदा उत्तम समय बिहानलाई मानिन्छ । तेलले मालिस गर्नाले छालाको चमक बढ्छ भने शरीर स्वस्थ्य रहन्छ । सके सम्म तेल नुहाउनु भन्दा पहिले लगाउन उचित मानिन्छ । तेल मालिस गर्नाले शारिरीक थकान पनि मेटिन्छ र शरीरमा उर्जा प्राप्त हुन्छ ।
दिनहुँ बिहान नुहाई धुवाई गरेपछि तुलसीको बोटमा जल चढाउनाले देवी देवताको कृपा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । जुन घरमा तुलसी हुन्छ त्यसको रेख देख हुन्छ दिनहु पानी चढाईन्छ त्यहाँ सुख समृद्धि प्राप्त हुन्छ । तुलसीलाई भगवान् विष्णुको प्रतिक मानिन्छ ।
सूर्यलाई जल चढाउनु :
गाईलाई रोटी ख्वाउनुहोस् :
लामो समय सम्म स्वस्थ रहन र शरीरलाई फूर्तिलो बनाइ राख्नको लागि सर्वश्रेष्ठ उपाय भनेको योगा हो । योगाले शरीरलाई धेरै किसिमका विमारीहरुबाट बचाउँछ । मानसिक स्थितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । ध्यानले क्रोधलाई नियन्त्रण गर्छ । मानसिक तनाब बाट मुक्ती दिलाउँछ । शरीरलाई रोग सँग लड्ने क्षमतामा वृद्धि गर्छ ।
हरेक दिन बिहान घरमा आफूले स्थापना गरेको मन्दिरमा दियो बाल्नु अगरबत्ति जलाउनु उत्तम कार्य मानिन्छ । दियोको उज्यालो र अगरबत्तिको धुवाँले घरको वातावरणका नकारात्मक उर्जा खतम हुन्छ भने हरेक दिन विहान घरमा बत्ति बाल्नाले वास्तुका अनुसार पनि कयौं दोषहरु हट्छन् ।
घर वा अफिसमा बाँसको बिरुवा रोप्दा कस्ताे असर हुन्छ ?
जीवनमा सफलता प्राप्त गर्ने चाणक्य नीति !
हाँसको जोडी घरमा राख्दा के हुन्छ ?
बुद्ध दर्शन र संस्कृति संसारमै लोकप्रिय छ : मन्त्री पौडेल
कामदेव र शिव शंकरको कथा !